Ny iPad ao an-dakilasy. Ny fiafaran'ny kilasy nentin-drazana? | Vaovao IPhone
Ny iPad ao an-dakilasy. Ny fiafaran'ny kilasy nentin-drazana?
Sekoly maro no mampiasa iPad, fa ahoana kosa raha ny rehetra traikefa amin'ny fanabeazana atolotra amin'ny alàlan'ny a takelaka? Izany indrindra no kasain'ny sekoly vaovao maro any Netherlands. Tsy hisy tabilao na fandaharam-potoana. Tapitra ve ny kilasy nentim-paharazana?
"Hafa ihany ny eritreritra". Mihoatra ny teny filamatra fanaovana dokambarotra dia nanjary fanehoana an-tsoratra, miaraka aminy, ny CEO taloha an'ny Apple, Steve Jobs Nanaitra ny indostrian'ny solosaina, ny indostrian'ny mozika ary ny tontolon'ny telefaona finday. Ny manaraka tanjona amin'ny maha-fahitana nomerika azy dia ny hahatratrarana a fiovana mahery vaika samy ao amin'ny Rafitra fanabeazana ary koa amin'ny orinasan-tsitrapo ataon'izy ireo.
Ny sasany amin'ireo hevitra mety nipoiran'i Jobs dia naseho tany Netherlands. Sekoly iraika ambin'ny folo Hisokatra amin'ny volana aogositra i "Steve Jobs", miaraka amin'ireo tanàna hampiantrano izany karazan-jotra izany i Amsterdam. SASANY zaza arivo eo anelanelan'ny efatra ka hatramin'ny roa ambin'ny folo taona no hanatrika sekoly, tsy misy kahie, boky na kitapo. Ny tsirairay amin'izy ireo, etsy ankilany, hanana iPad anao manokana ianao. Tsy hisy tabilao, tsaoka, mpampianatra loha, kilasy ofisialy, drafitry ny lesona na fipetrahana. Mazava ho azy fa tsy hanana ny anjara asan'ny mpampianatra manao lahateny na ny fivorian'ny ray aman-dreny izy ireo. Raha izy zaza aleony milalao amin'ny iPad-n'izy ireo toy izay mianatra, tsy ho olana izany ary izy ireo dia -Miaraka amin'ny fanampiana ny ray aman-dreny sy mpiambina- ireo izay safidio izay hianarana mifototra amin'ny zavatra hitany fa manintona.
Efa mandeha ny fanomanana Breda, tanàna akaikin'i Rotterdam, misy azy iray amin'ireo sekoly voarohirohy amin'ny tetikasa. Ny talen'izy ireo, Gertjan Kleinpaste, 53 taona, dia mahalala fa tsy ho ela dia ho lasa a-iPad ny sekoliny toerana halehany ho an'ny mpanabe fanavaozana manerana izao tontolo izao.
Na dia marina aza fa tsy mbola natomboka tany Espana ny tetikasa iraisana miaraka amina toetra mitovy amin'izany, dia manolotra ny iPad ho fitaovana lehibe amin'ny fianarany amin'ny drafitra fianaran'izy ireo ny vondrom-piarahamonina samihafa. Ohatra, avelanay anao ny horonan-tsary fampiroboroboana nataon'ny Sekolin'i Tajamar any Madrid izay anadihadian'izy ireo ny fampiasana ilay fitaovana ao an-dakilasy.
Miaina amin'ny vanim-potoanan'ny revolisiona teknolojia ao an-dakilasy isika. Isan'andro isika dia mampiasa ireo fitaovana ireo matetika amin'ny fampianarana. Ho avy ve ny andro anaovana ny fizotran'ny fanabeazana amin'ny alàlan'ny efijery? Inona ny hevitrao?
Fanazavana fanampiny - Ity ny fomba anampian'ny iPad ny ankizy mila fanabeazana manokana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny iPad ao an-dakilasy. Ny fiafaran'ny kilasy nentin-drazana?
Vaky! dia hoy izy:
Ary iza no mandany vola be amin'ny takelaka lafo vidy toy izany? Misafidy izay mora vidy hafa aho ...
BLKFORO dia hoy izy:
Izay hanidy anao avy hatrany amin'izay zavatra ezahinao atao amin'ny ankizy 28 miaraka. Efa nanandrana aho ary tsy lafo ny:
1) izay rehetra maharitra
2) ny fomba fiasan'izy ireo sy ny fahombiazany
3) ny zavatra rehetra azonao atao miaraka amin'izy ireo ho toy ny mahazatra ary tsy lasa adala
Valiny amin'i BLKFORO
Ny hoe mora vidy kokoa dia tsy midika hoe hiharatsy kokoa izany, heveriko fa ny hafa mety haharitra kokoa noho ny iPad mora marefo, satria aza manao hadisoana, tsy mahatohitra be, ary amin'ny takelaka hafa dia avela ny fidirana karatra SD ka ny mpianatra dia mitazona ny fitaovany, dia hanana fifanarahana bebe kokoa izy ireo, satria ny fahalalako azy dia paoma ihany no iasan'ny paoma. Bla bla, heveriko fa resaka tsiro io.
Apple dia manomboka manao patanty ny sary masina iOS 7
Candy Crush Saga: tetika vitsivitsy ho an'ny lalao maimaim-poana mahomby indrindra amin'ny App Store